Warbixin: Boqolaal Qof Kishtaan Kenyaan Ah Oo Sababa Ammaan Ugu Xayiran Magaalada Mandheera.
Wednesday December 06, 2017 - 11:11:15 in Wararka by Super Admin
Wadanka Kenya Wararka ka imaanaya ayaa sheegay in kumanaan qof oo Nasaara ah ay sababa Ammaan aawgeed ugu xayiranyihiin magaalooyin katirsan gobolka loo yaqaan Waqooyi Bari oo ah gobol Soomaalida xoog looga heysto.
Boqolaal qoys Kenyaan asal ah ayaa la sheegay in ay ku xayiranyihiin magaalooyin ay kamid yihiin Mandheera iyo Wajeer kadib markii maamulka gobolka uu diiday in uu dammaanad qaado ammaankooda.
Dadkan oo sanad walba marka lagaaro bisha December usafri jiray magaalada Nairobi si ay uga qeyb galaan dabaal degyada ciidda Kirishtanka ayaa lafilayaa in sanadkan ah ka baaqdsaan ka qeyb galka dabaal degyadaas sababa la xiriira Al Shabaab oo waddooyinka ka jaray.
Guddoomiyaha Mandheera Ninka lagu magacaabo Fredrick Shisia ayaa sheegay in maamulkiisu uusan damaanad qaadi karin ammaanka dadka sidaas daraadeed uu kula talinayo in ay guryahooda ku nagaadaan, saraakiisha Booliska Kenya ayaa diiday in ciidamo ilaala ah ay ku daraan gaadiidka Basaaska ee dadka Nasaarada ah u daabuli lahaa dhanka magaalada Nairobi.
"Dad badan ayaa guryahooda ku negaan doona sababtoo ah sababtoo ah dowladdu waa diiday in ay ammaankooda ilaaliyo marka ay waddooyinka ku safrayaan" sidaas waxaa yiri Mark Mwolobi.
Wuxuu intaas ku daraya in sanadkan uu dhankooda u yahay mid madoow sababa la xiriira iyagoo aan ka qeyb qaadan karin dabaal degyada ay dhiganayaan dadka Kirishtaanka ah wuxuuna xukuumadda ku dhaliilay in aysan xil iska saarin dammaanad qaadka shaqaalaha ka howlgalka gobolka NFD ee Kenya ay u bixisay Waqooyi Bari.
"Waxaa lagaaray xilliga Fantasyaha Christmas laakiin ma awoodno in aan qoysaskeena la qeybsanno dabaal degga sababtoo ah xukuumaddu waxay diidday in ay sugto ammaankeena waana xaq aan ku leenahay," ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mark Mwolobi.
Saraakiisha Booliska Kenya waxay sheegeen in ay ucaal waayeen ka hortagga weerarada Xoogaga Al Shabaab ay ku qaadaan gaadiidka Basaaska ah ee isaga kala goosha magaalooyinka Mandheera iyo Nairobi, bishii lasoo dhaafay weerar ka dhacay wadada xiriirisa Wajeer iyo Mandheere ayay Al Shabaab ku dishay 12 sarkaal oo Boolis ah, ciidamada ladilay ayaa ilaalo ka hayay gaadiid Basas ah.
Guddoomiyaha Mandheera ayaa si cad ugu sheegay dadka Kirishtaanka ah in aysan awoodin sugidda amnigooda marka ay basaska saaranyihiin, dhibaatadan dhanka ammaanka ah ee kajirta Kenya ayaa imaanaya xilli Xarakada Al Shabaab ay sare uqaadday weerarada ay ka geysanayso gobollada Lamu iyo NFD.